192.168.8.200 - Admin Pinda - Username uye nePassword
Iyo IP kero 192.168.8.200 yakachengeterwa kuwana iyo rauta admin skrini. Iyi IP, pamwe nevamwe vakaita sa192.168.1.11, 192.168.8.1, uye 192.168.168.1, inozivikanwa pasi rese router IPs. Mune zvinyorwa, inozivikanwa zvakare se "Default Gateway IP."
Iyo IP kero inotangira kubva 192.168.0.0 kusvika 192.168.255.255
Iyo IP kero senge 192.168.0.0 naizvozvowo 192.168.255.255 ndiwo mugove wema network enzvimbo akatsanangurwa Yemunharaunda Nharaunda Network LAN. Kamwe iyo gadget painotaurirana pamwe chete pasina kupfuura kuburikidza neinternet ino pacheka network inogadzirwa. Iyo 192.168.8.200 maadresi anowana nzvimbo yakabatana neinternet bhokisi, komputa paLAN, kana rimwe gadget rakasiyana mumumbure.
Iko login IP default iyo inochengeterwa waya isina waya kana modem mairaira. Mune kero bar nekiyi 192.168.8.200 mubrowser iwe unowana kuwana kune iyo admin muganho weiyo router. Kazhinji 192.168.8.200 inoitwa nevagadziri vakaita saAsoka. Haisi iyo chaiyo yakajairwa IP yeiyo router. Kune akawanda maIP akasiyana siyana semuenzaniso 192.168.2.1, 192.168.0.1, or 192.168.1.1 iyo yaishandiswa pakuwana iyo control panel yePower line Access Point. Iyi standard IP inotodaidzwa kuti Default IP Gateway.
Kugadzirisa iyo PW ye 192.168.8.200
Zvese iwe zvunofanirwa kuita kugadzirisa zvakare modem. Izvi zvinogona kuitwa zvirinyore nekusundidzira iyo reset switch kuseri kumashure kana pazasi memodem. Kana iwe wakabata diki switch yemasekondi makumi maviri, (iwe unofanirwa kuita izvi nekushandisa rezino), ipapo modem inodzoserwa kune iyo fekitori.
Simply iwe unofanirwa kuyeuka kuti kana yako modem iri Dzokerazve, iwe ucharasikirwa nehukama hwako hwepamhepo. Naizvozvo zvinokurudzirwa kutora rubatsiro rwehunyanzvi nzira.
Kana iwe uine ruzivo rwushoma, tinokurudzira kuti unofanira kutora rubatsiro kubva kune mumwe munhu ane ruzivo rwakadai.
The 192.168.8.200 IP kero inopihwa neConsortium GARR, ndeye CDIR 192.167.0.0/16. Simply nyora 192.168.8.200 kana nekudzvanya pane switch ita traceroute.
Pangosvika iyo 192.168.8.200 kero yaziva iyo router, manejimendi peji rewebhu rinowanikwa kubva kune internet browser
pinda https://192.168.8.200 yekuvhura iyo yekumisikidza interface, mune kero bar yeiyo browser. Mune zvimwe zviitiko, zvinokurudzirwa kushandisa ma alias ayo anoona chishandiso pane network.
Username & password ye 192.168.8.200